Ngaba Nguwe Oyedwa Olawula Ikhompyutha Yakho? - I-Semalt Expert
Kuchanekile ukuba ezinye i-malware, kuquka i-ransomware, inefuthe ngqo kwicebo lakho. Kodwa i-DDoS i-malnet malware ineendlela ezahlukeneyo zokusebenza, ezinye zazo ziyakuthatha ukulawula idivayisi yakho ngelixa abanye beqhubeka behamba ngokulumkileyo njengeefayile zangasemva kwaye balinde imiyalelo evela kumgcini we-bots okanye umxhasi we-botmaster. Iibhenets ezizimelayo zihlala zifumana i-bots ezongezelelweyo ngeendlela ezahlukeneyo. Imigudu yokusuleleka kubandakanya ukungabi nakwiiwebhusayithi, ukuphazamiseka kwephasiwedi ukufumana i-ID yabucala yomsebenzisi kunye ne-Trojan horse malware - how to find out what super you are with. Nangona kunjalo, bonke bavumela abacuki ukuba balawulwe baze basebenzise ikhompyutheni yakho okanye ifowuni yeselula. Ngokuqinisekileyo, akunakwenzeka ukubonisa inani elichanekileyo lebhodi, uqikelelo lubonisa ukuba kunezigidi ezingaphezu kweebhiliyoni zazo.
Kutheni i-botnets idale?
uFrank Abagnale, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uchaza ukuba iibhotile zenziwe ngenxa yokusebenza, ukuphazanyiswa ngurhulumente, ukuhlaselwa kweenzuzo kunye nezinye izizathu. Ukuqesha inkonzo ye-botnet kwi-intanethi ayithengi ngokukodwa xa uzame ukudibana nomnxeba woqobo.
Zilawulwa njani iibhenets?
Enye yeempawu eziphambili ze-botnets kukuba banako ukufumana ulwazi oluhlaziyiweyo ukusuka kubalusi bebhodi..Bahlala beqhagamshelana nabaxhasi be-botmasters, okuvumela abahlaseli baguqulwe idilesi ye-IP kwaye benze ngokwezigqibo ezithile zezenzo zakhe. Iiplani zebhanki ziyahluka, kwaye izakhiwo zazo zidilizwe kwiindidi ezahlukileyo, njengomzekelo we-botnet umzekelo kunye ne-peer-to-peer.
Umzekelo we-botnet yomthengi:
Yikho xa umatshini uqhagamshelwe kwi-server yangaphakathi, kwaye ugaxekile uhlose ukudibanisa iinkcukacha zakho. Ukuphefumula okuphambili kubandakanya imiyalelo ethile ye-botnets kwaye iguqula izixhobo zokusebenza ukwenzela ukuhlaziywa imiyalelo yemishini esulelekileyo.
Imodeli yohlobo lwe-botnet yoontanga:
Lo mzekelo unembopheleleko yokugcina uluhlu lwekhompyutheni ethembekileyo kunye nekhompyutheni engathembekiyo apho abaxhasi bebanxibelelana baza bahlaziya i-malware. Ngamanye amaxesha banciphisa inani loomatshini abacwangcisiweyo ngokusekelwe kwiimfuneko zabo kwaye benza kube nzima kubasebenzisi ukulandelela amagama abo abasebenzisi kunye namaphasiwedi. Ukuba ungekho kumaseva omyalelo ophakathi, unokuba yixhoba lale ntsholongwane. Ukwandisa ukhuseleko lwakho, kufuneka ulungelelanise iibhotile kwaye uzikhusele ekubhapheni ulwazi lwakho lwabucala.
Ukuphelisa intsholongwane kuzo zonke izixhobo:
Indlela eyoyiyo yokukrazula i-botnet ngokukuphelisa isifo kuzo zonke izixhobo zakho. Ngezixhobo ezizimeleyo, izicwangciso zokufumana ulawulo kumatshini ziquka ukusebenzisa ii-anti-malware okanye iinkqubo ze-antivirus, ukufaka isofthiwe kwimithombo ethembekileyo nokucoca i-cache yakho. Xa usuyenziwe, unokukwazi ukulahla lula iibhotile kwaye unokuqinisekisa ukhuseleko lwakho kwi-intanethi. Ngezixhobo ze-IOT, kufuneka usebenze ngokusetyenzwa kwefektri okanye ukufomatha ifowuni ngokwemiqathango yakho. Ukuba ezi zikhethi zingenakufezekisa, unokuqhagamshelana nomniki-nkonzo wakho we-intanethi uze umcele ukuba avaliwe inkqubo yakho phantsi kweeyure ezimbalwa okanye iintsuku.